Paralympika Analamanga :: Tompondakan’ny fibatana fonjamby ireo atletan’ny Cosaph • AoRaha
Paralympika Analamanga Tompondakan’ny fibatana fonjamby ireo atletan’ny Cosaph
Tontosa, tamin’ny sabotsy lasa teo, teny Mahamasina, ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga amin’ny taranja fibatana fonjamby ho an’ireo atleta manana fahasembanana ara-batana. Ireo atleta avy ao amin’ny klioba Cosaph no nandray anjara tamin’izany.
Fifaninanam-paritra voalohany ho an’ny taranja fibatana fonjamby izy io. Voahosotra ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny sedra “couché” Ranomenjanahary Sitrakiniaina Alban, rehefa nahazaka 160kg. Nahavita nibata 90kg kosa Rakotomahefa Jean Claude, tompondaka ho an’ny sokajy latsaky ny 60kg.
“Afaka mandray anjara amin’ny lalao iraisam-pirenena ireo atleta ireo raha ny zava-bitany androany. Najanona teo amin’ny 160kg kosa ny lanja farany ambony noho izy ireo vao manomboka amin’ny taranja”, hoy Rakotoarison Thomas, tale teknika nasionalin’ny Federasiona malagasin’ny fibatana fonjamby.
Nilaza Ranoromihaja Fabienne, filohan’ny ligin’Analamanga amin’ny taranja paralympika fa: “handray anjara amin’ny fiofanana any Dubaï ireo atleta ireo, amin’ny 10 hatramin’ny 17 marsa 2020 hoenti-manomana an’ireo fifaninanana hitrandrahana ny tapakila amin’ny Lalao Paralympika 2020”.
Fanabokonana hozatra Voaasa ho any Afrika Atsimo i Hoby Rabakoarisoa
Basket-ball – Sekoly ambony Ahemotra ny fifaninanana « Smatch In”
Haiady karate Takiana kara-pilalaovana avokoa ny klioba sy ny seksiona ary ny ligy
Fiainana mpilalao baolina kitra Mandray anjara amin’ny ady amin’ny coronavirus i Bapasy
Fikaonandoham-pirenena :: Hangonina ny hevitr’ireo mpanaraka baolina kitra any amin’ny faritra
Baolina lavalava – « Gold top 20 » :: Nahazo ny tapakila amin’ny famaranana ny Cosfa sy ny TFA